Doolarka TL Suuragal Ma ahan Suuradda Eurasia tunnel iyada oo la adeegsanayo YSS iyo Osmangazi Bridges | RayHaber | raillynews
[20 / 02 / 2020] 'Babayiğit' waxaa laga doonayaa Mashruuca Kartepe Cable Car	41 Kocaeli
[20 / 02 / 2020] Sanduuqa Dhaqaalaha kuma jiro Liistada Maalgashiga ee Istanbul	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDhoofinta Dollar ilaa TL oo ku yaala Eurasia Tunnel oo leh YSS iyo Osmangazi Bridges
Dhoofinta Dollar ilaa TL oo ku yaala Eurasia Tunnel oo leh YSS iyo Osmangazi Bridges
20 / 08 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, hyperlinks, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Yavuz Sultan Selim iyo Ottoman Osmangazi ee shirkadaha gaarka loo leeyahay, Tareenka Eurasia iyo Istanbul-Izmir ee isticmaalka deymaha ajnabiga ah ee bangiyada, deynta lacageed ayaan suurtagal ahayn in la gudbiyo TL.
Turkiga ee Duke of heerka sarifka lacagaha qalaad ee u dhexeeya dhibaatada US Brunson halkii on shirwaynaha. Ka dib markii uu arko qiimaha USD / TL 7.23, Gudoomiyaha MHP Bahceli wuxuu soo jeediyay in khidmooyinka wadada iyo buundooyinka sarrifka lacagaha lagu beddelayo TL.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Olcay Aydilek Habertürk'ten, oo ay tilmaameen Bahceli Yavuz Sultan Selim iyo buundooyinka Osmangazi, Gawaarida Eurasia Tunnel iyo Istanbul-Izmir, waxaa dhisey qaybta ganacsiga gaarka ah ee dhismaha. Mashruucyadan, lacagaha la bixiyo ayaa loo qoondeeyay lacag ahaan qalaad. Dawladdu waxay ballan-qaadday tiro gaadiid ah oo mashaariicdan ah. Haddii kala-guurka uu ka hooseeyo xadka damaanad-qaadista, gobolka ayaa bixiya faraqa. Bishii Abriil, bilyaneerka 2017 TL ayaa la siiyay mashaariicdaas iyada oo loo eegayo dammaanadda iyadoo kala-guurka ay ka hooseeyaan xadka 3.6.
Isagoo la hadlaya Aydilek oo aan magaciisa la sheegin, qaybta gaarka loo leeyahay ayaa isticmaalaya balaayiin doolar oo ka yimaada bangiyada gudaha iyo dibaddaba si loogu maalgeliyo mashaariicdaas oo ay ku nuuxnuuxsadeen inaysan macquul ahayn in lagu beddelo qadarin lacageed lacageed. Ilaha ayaa sheegay in ay adag tahay in bangiyada ay ku daraan isbedelkaas xataa xitaa qorshahooda.
Arrin kale oo muhiim ah waa qiyaasta ay dawladdu bixin doonto damaanad ah 2018 Taariikhda koowaad ee 8 ee sanadka waa ku dhawaad. Sanadkan 2018, mashaariicdaas waxaa laga yaabaa in ay ku xiran tahay damaanad bixin lacageed oo ah USD 3. Marka la xisaabinayo, qiimaha dollarka 2 January 2018 waa la tixgelin doonaa. Is-beddelkan waxaa lagu kordhin doonaa gawaarida hoos yimaada xadka damaanada. Lacag bixinta waxaa la samayn doonaa bisha Abriil ee sanadka 2019.
Isha: waxaan tr.sputniknews.co
YSS Bridge iyo Tareenka Eurasia ayaa fududaynaya taraafikada Istanbul
5 maaha dollar sababo badan oo ka yimaada Bridge ee Osmangazi Bridge
Yavuz Sultan Selim iyo Osmangazi Bridges ayaa soo galey kharash
Suurtagal maaha in la kordhiyo dayuuradaha Bursaray
Suurtagal ma aha in YHT ay la dhacdo TIR
Suurtagal ma ahan in lagu soo bandhigo TCDD ee Sheekada Mudada dheer!
Adana Metro ma'aha suurtagal in la cirib tiro Adana
Suurtogal maaha in la fataho Marmaray
Awood ma lahan karo in lala hadlo telefoonada gacanta ee Istanbul Metro
Dayuuradaha Aliağaya habeenkii maya
HGSli awoodi kari waayaan
Bosphorus Bridges oo Timaado Timaado ah
Isku xirka Istanbul-Izmir
gaari Prometeo Turkiga lahaa 9 kun km Floor wadada, 5 kun gaarsiisan Drivers Truck